EtiMnga 2017 | Gcina A Isitimela
Inyanga: EtiMnga 2017
ekhaya > EtiMnga 2017
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu A uhambo onegunya ukunyanzela ukuba ume, sibone phandle ngefestile aqonde akanaso ukuthatha ixesha lethu. sihamba kumnandi kodwa ngamanye amaxesha zingathathela bonke amandla ethu, i uhambo olude ithuba ukucima kamnandi uze uzive uhlazi-. Yenza kakhulu…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Christmas Markets ngu Train kunceda singene ngeKrismesi kunye uhambo ukuya kwesinye sezixeko best eYurophu. Ahambe ngetreyini, kwaye wenze namava akho kakhulu omlingo ngonaphakade! Izikhululo abaninzi ibekwe entliziyweni kombindi wedolophu, making traveling by…